‘सिक्रेट न्युडिष्ट भिलेज’ जहाँ कसैले लुगा लगाउँदैनन् ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/‘सिक्रेट न्युडिष्ट भिलेज’ जहाँ कसैले लुगा लगाउँदैनन् !
विश्वमा कैयौं यस्ता शहर छन्, जहाँ आआफ्नै रितिरिवाज, परम्परा र चलनले ती स्थान चर्चित छन् । यस्तै स्थान मध्ये एक हो, सिक्रेट न्युडिष्ट भिलेज । बेलायतमा रहेको सिक्रेट भिलेजमा पत्याउन नसकिने रहनसहनको चलन छ ।
यस गाउँमा मानिसहरुमा कपडा नलाउने परम्परा रहेको छ । उनीहरु गरिब भएर वा कपडा नभएर नलगाएका होइनन् बर्षौदेखिको परम्पराको निरन्तरता अनुसार उनीहरु कपडा लगाउँदैनन् । यस सिक्रेट गाउँका मानिसमा मूलभूत सुविधाको कमी छैन ।
तर परम्परा र मान्यता अनुसार यहाँका मानिस बिना कपडा बस्ने गर्दछन् । कतिसम्म भने यहाँका बालक वृद्ध मात्र नभई वयस्क र महिला समेत ना’गों बस्दछन् । बेलायतको यो गाउँ पुरानो गाउँ मध्ये एक हो, जहाँ राम्रा घरहरु मात्र नभई शानदार स्विमिंग पूल सुविधा समेत उपलब्ध छ । पछिल्लो ९० बर्षदेखि यस गाउँमा मानिसको बसोबास हुदैँ आएको छ ।
व्रत बसेको बेला यौ*नस*म्पर्क गर्न मि*ल्छ कि मिल्दैन ! यस्ता छन् तर्क ?
‘कुन उमेरका महिलासँग यौन सम्पर्क गर्दा बढी सन्तुष्टी मिल्छ ?’